Sunday June 04, 2017 - 22:19:57 in Wararka by Super Admin
Wararka ka imaanaya Britain ayaa sheegaya in weerar loo adeegsaday Tooreey iyo gaari Jiirsiin ay ku dhinteen ugu yaraan 6 qof oo shacab ah sida ay sheegeen saraakiisha Booliska.
Weerarka oo ka dhacay Buundada magaalada London ee mashquulka badan waxaa geystay rag tooreeyo ku hubeysan, goob joogayaal ayaa sheegay in 48 qof ay si xun ugu dhaawacmeen weerarka halka 7 qof ay isla goobta weerarku ka dhacay ku dhinteen.
Haweenayda R/wasaaraha ka ah wadanka Britain Theresa May ayaa ku dhawaaqday in weerarkan uu yahay wax ay ugu yeertay weerar ‘Argagaxiso’ waxayna muwaadiniinta wadankeeda ugu baaqday in ay ka qeyb qaataan howlgallada sugidda ammaanka.
Taliyaha Booliska Ingiriiska ayaa ka codsaday dad weynaha in ay xarumaha ciidanka gaarsiiyaan dhammaan macluumaadka ku saabsan weerarka sida sawirro iyo Video-yo goobta laga qaaday si ay ugu kaashadaan baaritaanada socda.
Waa weerarkii sedaxaad oo Britain ay la kulanto wax ka yar 3 bilood, xoogaga weerarka geysanaya ayaa ku guuleystay in ay ka dhax dusaan hay’adaha ammaanka Ingiriiska oo umuuqda in ay ku fashilmeen ka hortagga weerarada.
Sheekh Xamza Bin Laden oo ah wiil uu dhalay hoggaamiyihii hore ee Ururka Al Qaacidda ayaa bishii lasoo dhaafay soo diray kalimad uu ku bogaadinayo weerarada kaligii duulnimo ee ay dhalinyarada muslimiinta ah ka fulinayaan wadamada reergalbeedka balse lama oga in weerarkan uu cilaaqo la leeyahay jamaacaadka jihaadiga ah iyo inkale.